ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း | အရိုးခွဲစိတ်ကုသမှု
ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း
Reduction of blood loss with the use ofanew combined intra-operative and post-operative autologous blood transfusion system compared with no drainage in primary total hip replacement. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Bone Joint J 2013;95-B(5):616-22.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 23632670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23632670 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Can there beaplace for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 24566859
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery:asystematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 24384492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Blood management in total knee arthroplasty:acomparison of techniques. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Orthopedics 2009;32(1):19.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 19226044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19226044 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Efficacy of intraoperative blood collection and reinfusion in revision total hip arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(11):2147-51.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 14630844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630844 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း
Bloodless spinal surgery:areview of the normovolemic hemodilution technique. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Surg Neurol 2008;70(6):614-8.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 18423553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18423553 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)